​ေဟ့သယ္​ရင္​း — Steemit
လူတွေကိုအမေရိကန်အင်္ဂလိပ်၌တစုံတခုကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးသောကျား, မ-ကြားနေအသုံးအနှုန်းများများများရှိပါတယ်။ ရာစုနှစ်ချန်ပီယံခဲ့ရပြီးနည်းနည်း-အသုံးပြုသောဆက်လက်တည်ရှိသော xe သို့မဟုတ် zir တူသော upstart နာမ်စားကွညျ့ပါ။ ရေနွေးငွေ့ရရှိမှုပေမယ် freshman supplanting ရှေ့မှာသှားဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရှိပါတယ်ထားတဲ့ "ပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသား," စဉ်းစားပါ။ ဒါမှမဟုတ် port ကိုစွန့်ခွာဖို့သေးရှိသည်သော "midshiperson" ကဲ့သို့ genderless စစ်ရေးခေါင်းစဉ်, ပတ်သက်. ဆွေးနွေးမှုများမှတ်မိသေးတယ်
။ ထို့အပြင်လေယာဉ်မယ်ကနေ alum မှအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ, ရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦး Latino မှအခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ် Latina - - ကြောင်းဦးတည်ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့်ကနာမဝိသေသန Latinx ပုံရသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစင်တာများသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖို့စကားလုံးဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအနုပညာရှင်နှင့်နိုင်ငံရေးအရတက်ကြွလူငယ်များအကြားက de rigueur ဖြစ်လာနေသည်။ က NPR နဲ့တူမီဒီယာမှတ်ချက်သို့မဟုတ်ရှင်းပြချက်မရှိဘဲအသုံးပြုနေကြသည်။ ဒီစကားလုံးပါဝါတည်းခိုခဲ့သည်အခြားသောနိမိတ်လက္ခဏာ: အဘိဓါနျမကြာသေးမီကကြောင့်သတ်မှတ်ဖို့အချိန်ယူကြပြီ။ Latinx (adj ။ ): (Latino သို့မဟုတ် Latina တစ်ဦးကျား-ကြားနေသို့မဟုတ် Non-binary အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အသုံးပြု) လက်တင်အမေရိကဇာစ်မြစ်သို့မဟုတ်နွယ်ဖွားလူဦးပတ်သက်သော ကောလိပ်ကျောင်းမှတက်ပါပဲသောစကားလုံး, အတော်ကြာအဆင့်ဆင့်အပေါ်အယူခံရှိပါတယ်။
အခြို့သောအဘို့, Latinx သုံးပြီးအမျိုးသမီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ခရစ်စတီးနား Mora ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒ၏တွဲဖက်ပါမောက္ခ, ဘာကလေ, သူတို့ကြောင့်သူမပထမဦးဆုံးလူငယ်များကို အသုံးပြု. ခဲ့တဲ့ကျား, မ-ကြားနေအသုံးအနှုန်းကြောင့်ကြုံတွေ့ပြောပါတယ်ဥပမာ "ဘာသာစကားမှာမွေးရာပါသည့်ဖခင်အုပ်စိုးကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည်ငြီးငွေ့။ ": ခုနှစ်တွင် အများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကြောင်းပင်တဦးတည်း - - လက်တင်အမေရိကန်တွေ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျား၏အုပ်စုတစုသို့မဟုတ်တစ်ရောနှောအုပ်စုတစ်စုအနေဖြင့်စပိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအုပ်စု Latinas အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူများကိုဤမှာသူတို့တစ်တွေက default နာမ်စားအဖြစ်သူကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ် "ယောက်ျားတွေ" ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှအဖြစ်ရောထွေးအုပ်စုများကိုရည်ညွှန်းမှာ balk ချင်ပါတယ်တူညီသောလမ်း balk စေခြင်းငှါ, အဆိုပါ subtext အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် "gals ။ ": ဒါဟာလူသားရဲ့ကမ္ဘာမှာမယ့်, သင်မင်းသမီးရုံ၌ရှိကြ၏ က။ Latinx "သူတို့" အင်္ဂလိပ်လို "ဟုသူက" သို့မဟုတ် "သူမ" အကြားရွေးချယ်မှုရှောင်အများကြီးအနည်းကိန်းသုံးပြီးလိုပဲလူအုပျစုများအတွက်ကျားသို့မဟုတ်အမည်မသိတစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြရှောင်ရှားရန်တစ်လမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ နှစ်ဦးစလုံးမရေိကကျား, မ rethinking သမျှနယ်နိမိတ်ကအတူပါလာလိမ့်မယ်သောအခါအချိန်အတွက်ရေနွေးငွေ့ရရှိမှုနေကြသည်။ Mora ကြောင်းသင်္ကေတတစ်ခုဣတ္ "a" ကိုအမျိုးအနွယ်တူဖြစ်သောကြောင့်, လူမျိုးစု (လက်တင် / က) အကြောင်းကိုရေးသား Latin သို့မဟုတ် @ အဖြစ်စကားလုံးရေးသားသည့်အခါနှစ်ဦးစလုံးနောက်ဆုံးတွင်အပါအဝင်ကဲ့သို့အတိတ်၌ဤမှောရှောင်ရှားရန်သည်အခြားကြိုးပမ်းမှုများရှိခဲ့ကြပြီမှတ်ချက်ပြု နှင့် "။ " o masculine ဒါပေမယ့်မျဉ်းစောင်းကိုသုံးပြီးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအစဉ်က Latinx စီရင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးရဲ့ဝေဖန်မှုရှိခဲ့သည် - လူအတော်များများ Kleenex နဲ့တူ ", La-Tee-NEX" ဟုပြော - ကလွှင့်ဖို့ဘယ်လိုတောင်မှသိပ်မထင်ရှားတဲ့ရဲ့ "@ ။ " အဆိုပါ "x ကို" ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှု permeating ခဲ့ကြကြောင်း LGBTQ နိုင်ငံရေးနှင့်အတူ jibes ။ လူငယ်များ၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကလူတိုင်းအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး (ကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကလုံးဝလိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လုံးဝဖြောင့်သော်လည်းကောင်းအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ငြင်းဆန်ရုံများကဲ့သို့) ၏ဒွိအမျိုးအစားသို့ကျရောက်သောအယူအဆကိုငြင်းပယ်။ Non-binary အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်သူတွေကိုမ box ကိုကိုက်ညီသို့မဟုတ်လုပ်ပေးသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ခံစားချက်များကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲနိုင်သည်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းကိုခံစားရပေလိမ့်မည်။
"ဒီကျားမနှင့်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွဲပြားခြားနားသောနားလည်မှုနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Mora ကပြောပါတယ်။ အခြို့သောအဘို့, တံဆိပ် Latinx "ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဌာန၌ gendered ရပါမည်ကြောင်းကိုစိတ်ကူးဆန့်ကျင်တွန်း။ " အဆိုပါစာ X ကိုအမည်မသိတည်နေရာသို့မဟုတ်ပမာဏရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ပုန်ကန်တတ်သော patina ရှိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ "အမြင်အာရုံမှာစာနှင့် ပတ်သက်. ဖမ်းဆီးတစ်ခုခုရှိတယ်," ဘာသာဗေဒပညာရှင်ဘင် Zimmer ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာသင့်ရဲ့အုပ်စုတစ်စုကျောင်းဝင်းအပေါ်အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ကြေညာပိုစတာအပေါ်ကောင်းသောကြည့်ရှုသည်။ " သူက "က x" တံဆိပ်ကိုချက်ချင်းနိုင်ငံရေးကြေညာချက်ဖြစ်ပေါ်လာကူညီပေးသည်ကပြောပါတယ်။ အများအပြားအနက်ရောင်အမေရိကန်တွေကျွန်ပိုင်ရှင်များ၏နောက်ဆုံးအမည်များကိုအတူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သောတစ်ဦးစနစ်အခေါတစ်လမ်းအဖြစ်အက္ခရာကိုအသုံးပြုတဲ့သူ Malcolm X ကို, စဉ်းစားပါ။ Zimmer ကိုလည်းဖော်ပြချက်အတုယူလာအောင်နှိုးဆွဖို့လုံလောက်တဲ့လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု: Chicano Chicanx အဖြစ် recast လျက်ရှိသည်; Filipinx အဖြစ် filipina ။
ကက်သရင်းမာတင်, Oxford ရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘိဓါန်များဦးခေါင်းသည်ကျား, မ-ကြားနေ honorific MX ဖို့တူညီထွက်ထောက်ပြသည်။ သူတို့ undeclared သူတို့ရဲ့ကျား, မစွန့်ခွာချင်လျှင်လူတွေအစားမစ္စတာသို့မဟုတ်မစ္စစ်၏သုံးနိုငျရာ။ သူမသည် 2016 ခုနှစ် Orlando တွင်အဆိုပါ Pulse နိုက်ကလပ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ပစ်ခတ်မှုဒါဟာနာယကဟာလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်လက်တင်အမေရိကန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အမြစ်များရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာစုဝေးပွဲချင်းပြီးခဲ့ပြီးနောက်၎င်းတို့၏သုတေသနပြုမှုနှုန်းသည်စကားလုံး Latinx အမေရိကန်ဝိညာဏ်သို့ထိုးခဲ့ပါတယ်, သူကပြောပါတယ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအဲဒီမှာဖြစ်ပျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာလွှမ်းခြုံမှာထပ်အချိန်အထိလှီးဖြတ်ပါ။ "ဒါကတစ်ခုနဲ့ပက်ပင်းအချက်ပဲ" ဟုမာတင်ကပြောပါတယ်။ အများအပြားပါဝင်သောအဖြစ်တံဆိပ်ရှုမြင်နေစဉ်, နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဝေဖန်ထားခြင်းရှိပါတယ်။ Ed က Morales, Ethnicity, လူမျိုးများ၏လေ့လာဘို့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့ရေးစင်တာမှာကထိက, Latinx အနာဂတ်အသံကပြောပါတယ် - နှငျ့အခြို့ကိုအခြားသူများအစဉ်အလာကိုပိုနှစ်သက်မယ်လို့အကောင်းတစ်ဦးအရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေစဉ်။ ဝေဖန်သူများကလူဝင်မှုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့စပိန်ဘာသာစကားဖျက်ခြင်းကြောင့်လည်းအမေရိကန်အသံကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ အခြားသူများကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမေရိကန်များနှင့်ဝေါဟာရကိုမသုံးကြသူလက်တင်အမေရိကရှိလူများအကြားအကွာအဝေးကိုဖန်တီးပေးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ "တချို့လူတွေကပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး fo, ကထူးဆန်းအသံထင်